Huawei P30 Lite: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Nyaahụ ka Huawei P30 na P30 Pro gosipụtara na nzuzo na ihe omume na Paris. Ọ bụ ọhụụ dị ọhụrụ nke akara ndị China, akpọrọ ka ọ chịkwaa akụkụ a na ahịa gam akporo. Ihe dị mma bụ na n'ime ihe ngosi ndị a enwere ụdị atọ, otu n'ime ha bụ usoro Lite, ihe dị mfe. Ọ bụ ezie na na ngosipụta nke ụnyaahụ anyị nwere ike ịhụ naanị ụdị abụọ a. Ma Huawei P30 Lite bụzi onye gọọmentị.
Anyị na-ahụ a nwetụrụ ụdị edozi ụdị nke ụdị dị elu. Ọ bụ ezie na e gosipụtara ihe nlereanya a dị ka nnukwu nhọrọ. Banyere imewe, Huawei P30 Lite na-akụ nzọ n'usoro nke ụdị ndị ọzọ. Anyị na-ahụkwa na ọnụnọ nke igwefoto dị na ya.
N'ụtụtụ a, amachibido ụfọdụ nkọwa ekwentị. Mgbe awa ole na ole gasịrị, anyị nwererịrị nkọwa niile gbasara akara ngosi ọhụụ ọhụrụ nke akara ndị China. Dị ka ọ bụ omenala maka ekwentị n'ime nke a, na-eji Kirin 710 dị ka nhazi n'ime.
1 Nkọwapụta Huawei P30 Lite
Nkọwapụta Huawei P30 Lite
Nhazi ahụ agbanweghị nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ụdị abụọ dị elu. Ihuenyo nwere akara n'ụdị mmiri mmiri, nke anaghị achịkwa ihuenyo nke ukwuu. Tụkwasị na nke ahụ, akara ahụ ahọrọla iji belata okpokolo agba ahụ ruo na nke kachasị na ihuenyo ahụ, nke na-enye ohere iji ojiji nke n'ihu ngwaọrụ ahụ. Na azụ anyị na-achọta igwefoto okpukpu atọ, nke doro anya ga-abụ otu n'ime ike nke ekwentị. Ndị a bụ nkọwa nke Huawei P30 Lite:
Ihuenyo: 6,15-anụ ọhịa IPS / LCD na FullHD + Mkpebi (2.312 x 1.080 pikselụ)
Nhazi: Kirin 710
GPUEbe: Mali G51
Nchekwa ime: 128 GB (Gbasaa na microSD)
Rear igwefoto: 24 + 8 + 2MP
Batrị: 3.340 mAh na ngwa ngwa
Usoro njikwa: Akara 9 Android na EMUI 9.0.1
Njikọ: WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, USB-C, isi okwu isi
Akụkụ: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm
Ibu ibu: 159 grams
Ngalaba foto na-ekwe nkwa inwe obi abụọ na Huawei P30 Lite. Na mgbakwunye na ị hụ mmezi doro anya na ya ma e jiri ya tụnyere ụdị afọ gara aga. N'okwu a, a na-eji kamera azụ okpukpu atọ, jiri ya tụnyere igwefoto okpukpu abụọ n'afọ gara aga. Ọ bụ nchikota nke ihe mmetụta dị iche iche. N'otu aka, anyị nwere ihe mmetụta 24 MP kachasị na oghere f / 1.8, yana 8 MP ultra-wide-angle secondary sensor na nke atọ anyị nwere ihe mmetụta 2 MP ToF.
Ọzọkwa, igwefoto ekwentị na-eji ikike ọgụgụ isi arụ ọrụ, ekele na NPU na Kirin 710. N'ụzọ dị otú a, a pụrụ ịmata ụdị ihe oyiyi 22 na edemede asatọ n'ihe gbasara igwefoto n'ihu ekwentị. Igwefoto 32 MP, nke dị na ọkwa ekwentị. Ọ bụ otu ihe mmetụta ahụ, ọ dị ka ọ dịkarịa ala, na anyị ahụwo n'ụdị abụọ ndị ọzọ. Anyị amaghị ihe ọ bụla banyere vidiyo na ngwaọrụ a n'oge a.
Huawei P30 Lite nwere batrị 3.340 mAh ikike, nke nwekwara nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa. N'aka nke ọzọ, n'ihi ọnụnọ nke Android Pie na Kirin 710 processor, a na-atụ anya na ọ ga-enye anyị nnwere onwe dị mma n'oge niile. Ebe ọ bụ na sistemụ arụmọrụ nwere usoro ntọala batrị, nke na-enye ohere njikarịcha nke ọma, nke kwesịrị ịbụ ezigbo enyemaka maka ndị ọrụ. N'okwu a, a na-edebe ihe mmetụta mkpịsị aka na azụ nke ekwentị ahụ, n'adịghị ka njedebe dị elu, nke etinyere ya na ihuenyo. Onweghi ihe ekwuru banyere imeghe ihu na ihe nlere a.
N'oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya ekwenyeghi ọnụahịa nke Huawei P30 Lite a aga enwe ya na ahia. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịhụ ọnụahịa ọ ga-enwe na ụfọdụ ụlọ ahịa na Canada. Ya mere, anyị nwere ike ịmata otu ihe ị ga-atụ anya mgbe ị rutere Spain. Ebe ọ bụ na Canada, ọ nwere ọnụahịa nke dollar 450.
Mgbanwe ahụ bụ ihe dịka euro 399, nke nwere ike ịbụ ọnụahịa a ga-eji rụọ ụdị a na Europe. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-abụ ọnụahịa dị elu karịa ihe anyị hụrụla na ụdị afọ gara aga. Ma mmelite ndị e sere na kamera ndị ahụ, tinyere mgbanwe e nwere n'usoro ekike enwewo mmetụta n'akụkụ a. Ọ bụ ezie na anyị na-eche ụfọdụ nkwenye na ọnụahịa ya n'oge na-adịghị anya.
A tọhapụrụ ya na otu ụdị nke RAM na nchekwa dị n'ime, 6/128 GB. Banyere agba, n'adịghị ka ụdị ụnyaahụ, anyị bụ naanị na agba abụọ na nke a. Ọ bụ a Twilight ndo, ndị a-acha anụnụ anụnụ-acha odo odo na agba na nke abụọ bụ a kpochapụwo nwa agba. Maka ugbu a, anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara mmalite ya n'ụlọ ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei P30 Lite bụzi ọrụ